हस्तमैथुन स्वास्थ्यको लागि कत्तिको सहि ? जान्नुस् यस्ता छन् हस्तमैथुनका ५ फाइदा « Online Tv Nepal
हस्तमैथुन स्वास्थ्यको लागि कत्तिको सहि ? जान्नुस् यस्ता छन् हस्तमैथुनका ५ फाइदा
Published : 21 November, 2018 7:22 am
कतिपय समाज र आम धारणामा हस्तमैथुनलाई अनैतिक र हानिकारक मानिन्छ । तर विशेषज्ञहरु यसको ठिक उल्टो अर्थात हस्तमैथुन एक स्वस्थ यौन जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो भन्छन् ।हस्तमैथुन भनेको हात वा अन्य कुनै चीजबाट यौन आनन्द प्राप्त गर्ने तरिका हो । विशेषज्ञहरु भन्छन्, ‘यो सुखको अनुभूति सँगसँगै पुरुष र महिलाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ ।’ विशेषज्ञहरुका अनुसार हस्तमैथुनका पाँच फाइदा यसप्रकार छन् ।
१)महिनावारीसँग जोडिएको दुखाई हटाउनका लागि हस्तमैथुनले सहयोग गर्छ । हस्त मैथुन गर्दा निक्लने तरल पदार्थले दुखाइ कम गर्छ र राहत दिन्छ ।फिनवर्ग स्कूल अफ मेडिसिनमा स्त्री तथा प्रसूती रोगका प्रोफेसर लारा स्ट्रीचर भन्छिन्, हस्तमैथुनबाट निस्कने झोलिलो पदार्थले योनीमा हुने सुखापन हटाउँछ र दुखाइ क मगर्न मद्दत गर्छ ।
२) मानिसहरुमा हस्तमैथुनले यौन जीवन बिग्रन्छ भन्ने बुझाइ छ । विशेषज्ञहरु भन्छन्, यो गलत मान्यता स्थापित भएको छ । यो ठ्यक्कै उल्टो हुन्छ । हस्तमैथुनले मजबुद यौन सम्बन्ध बनाउन सहयाेग पुग्नेछ ।३)फ्रेन्च इन्स्टीच्युट अफ हेल्थ एण्ड मेडिकल रिसर्चको अनुसन्धान अनुसार हस्तमैथुन पछि निकै मिठो निन्द्रा लाग्छ । विशेषगरी पुरुषहरुका लागि निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट छुट्कारा पाउनका लागि यो सबैभन्दा सुरक्षित र उपयोगी तरिका भएको विशेषज्ञहरु बताउँछन् । किनकि हस्तमैथुनपछि पुरुषमा यौन इच्छा पूरा हुन्छ र निन्द्रा लाग्न थाल्छ ।
४) हस्तमैथुनले शारिरिक र मनौबैज्ञानिक स्तरमा आरम महशुस हुन्छ ।५)सेक्सुअल एण्ड रिलेशनसीप थेरापीका अनुसार हस्तमैथुनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ ।अनुसन्धानका अनुसार जुन मानिसमा आर्गेज्म धेरै हुन्छ उसलाई इम्युनोग्लोबिन ए को मात्रा धेरै हुने भएकाले यसबाट बचाउन मद्दत गर्छ ।
गाउँलेसँग एक करोड उठाएर महिला फरार भएपछि…
बुटवल : रुपन्देहीको देवदहमा एक महिलाले एक करोड रुपैयाँ बढी रकम लिएर फरार भएको भन्दै
सुत्ने समयमा यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस्, सुख र शान्ति मिल्छ ?
शास्त्रले सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि रातिको निद्रासँग गहिरो सम्बन्ध रहने बताउँछ । राति
कस्तो व्यक्ति कसरी सुत्ने ?
खानपान तथा रहनसहन सही नहुँदा शरीरमा विभिन्न रोगले घर गर्छन् । यो त सबैलाई थाहै